Mukadzi akabiwa anunurwa nekuda kweApple Watch | Ndinobva mac
Mukadzi akabiwa anunurwa nekuda kweApple Watch
Zvaticha taura nhasi hachisi chinhu chinowanzoitika-nerombo- kunyangwe chiri chokwadi icho Apple Watch inogara ichipa nyaya nezve kutanga kuziva zvirwere, yambiro yetsaona dzemarudzi ese kuburikidza kana yambiro yekudonha.
Panguva ino nhepfenyuro yeterevhizheni gava kubva kuSan Antonio, yakaburitsa nyaya nezve kununurwa kwemukadzi anga akabatwa newaimbova murume wake. Iyo nzvimbo yemukadzi yaive yekutenda kune iyo Apple wachi kubva sarudzo yeku kufona neApple chishandiso tinogona kuti chakamuponesa.
Izvo zviitiko zvakaitika gore rapfuura, kunyanya muna Zvita 16. Mushure mekukakavadzana kukuru, mukadzi uyu akamanikidzwa kupinda mumotokari yemurume wekare uye akakwanisa kufonera mwanasikana wake pane imwe nguva kuyambira vakuru kuti anga ari munjodzi. Mwanasikana akakasira kukumbira nzvimbo asi zvaisakwanisika kuiwana. Panguva ino mapurisa akaedza kutsvaga runhare uye nzira yakanakisa yekuzviita yaive nesarudzo yekutsvaga yeApple zvishandiso.
Vakaona kuti mukadzi uyu aive munzvimbo yekupaka yeHyatt Place Hotel, mukati mekombi nemurume wake aimbova murume vatiza. Zvinotaridza kuti zuva rakatevera vakakwanisa kusunga uyo anonzi akabiwa mukadzi uyu uye nyaya yacho yakapera zvakanaka.
Kuva nemukana wekufona kubva kuApple Watch kunyangwe iwe usina iyo iPhone pauri kana yakadzimwa hapana mubvunzo sarudzo yakanaka kwazvo yekufona. Apple inofanirwa kuita iyi sarudzo muma wachi ayo ese emutengo mumwe chete uye zviri pachena kuti vanoshanda vanofanirwa kubvumidza kushandisa iyi sarudzo pasina muripo kune mushandisi uyo anotobhadhara yakawanda mumitengo yazvino.
Ini pachangu, yangu Series 4 ndiyo LTE modhi uye ini ndagutsikana nesarudzo iyi inotibvumidza kuti tifonere takazvimiririra neiyo iPhone, asi wandinoshanda iye zvino haape zvirongwa zveichi uye nekudaro hazvibatsire zvakanyanya. Hazvirevi kuti icho chinhu chakakosha asi chinokurudzirwa zvikuru nekuti iwe unogona kutibatsira chero nguva uye mamiriro.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Ndinobva mac » Apple zvigadzirwa » Apple Watch » Mukadzi akabiwa anunurwa nekuda kweApple Watch
62% yevanyoreri veApple TV + vari kushandisa nguva yekuyedza uye vazhinji havana kuronga kuvandudza
Mifananidzo yaGeorge Floyd kubva kuPortland Apple Chitoro iye zvino yave neanogamuchira